Nahoana No Antsoin’ny Mponin’i Hong Kong hoe “689” Ny Filoha Mpanantateraka CY Leung ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Janoary 2016 5:34 GMT
Nankatoavin'ny vato 689 tao amin'ny komitim-pifidianana tamin'ny taona 2012 ny filoha mpanatanteraka ao Hong Kong, Leung Chun Ying. Sary avy amin'ny HKFP.
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'i Hong Wrong ary nivoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 17 Janoary 2016. Navoaka teto amin'ny Global Voices ity dika ity noho ny fifanaraham-piaraha-miasa.
Mponin'i Hong Kong marobe no mahalala fa 689 ny anaram-bositry ny Lehiben'ny mpanatanteraka ao an-tanàna CY Leung.
Tamin'ny 2012, voafidy teo amin'ny toerany tamin'ny isam-bato 689 monja avy amin'ny komitim-pifidianana – vondrona nofantenin'ny mpifidy misolo tena ireo sehatra samihafa izay navela hifidy ny filoha mpanatanteraka i Leung. Napetraka hiova amin'ny fifidianana filoha mpanatanteraka amin'ny taona 2017 izany dingana izany mba hamelana ny mponin'i Hong Kong rehetra hifidy, saingy avy amin'ny lisitry ny kandidà neken'ny komity mitovy amin'ny komitim-pifidianana ihany.
Satria voafidy tamin'ny isam-bato 6,89 tapitrisa ny filoha voafidy vaovao ao Taiwan, Tsai Ying-wen , manjary majika kokoa ny isa.
Tamin'ny 2014, nisioka sary manazava ny rafitra sarotsarotra ny sampam-pahalalam-baovao AFP:
Nahoana no nantsoin’ izy ireo hoe ‘689’ i Leung Chun-ying? Manazava ny fomba nahazoan'ny filohan'i HongKong ny anaram-bositra teo amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny sary.
Matetika voakorontan'ireo mpanao lalàna demaokraty ao amin'ny antenimiera i Leung – indrindra fa avy amin'i Wong Yuk-man – ary tia mampahatsiahy azy ny isa. Ity ambany ity ny kabary nataon'i Wong izay manakiana ny filoha mpanatanteraka ao amin'ny Vaomiera Mpanao Lalàna :
Natao nandritra ny fotoana Fanontaniana sy Valiny tamin'ny lahateny politikan'i Leung tamin'ny 22 Oktobra 2015 ny kabary. Tahaka izao ny 30 segondra voalohany tamin'ny ny kabarin'i Wong :
Telo taona lasa izay, nampiasa ity teny 689 ity aho mba hamaritana ny olona tsy azo itokisana, mpandainga manana toetra ambany. Tsy manana ny fahaizana ilaina hitantànana an'i Hong Kong io olona io. Telo taona taty aoriana, voaporofo tamin'ny zavatra fa nataony fa marina sy tsy mitanila ny nolazaiko …
Nofaranany tamin'ny fanontaniana ny kabariny: “689, rahoviana ianao no ho faty?
Matetika hita amin'ny fihetsiketsehana ihany koa io isa io:
Hoy ny vaikin'ny sora-baventin'ny fihetsiketsehana, “689: Mialà faran'izay haingana”. Sary: HKFP.
Ary nalaza indrindra nandritra ny fihetsiketsehan'ny mpanohana ny demaokrasia 2014 manao fibodoana izany.
Laharan'ny Fiara iombonana amin'ny alina: 689. Toerana aleha: Helo. Sary: HKFP
Tamin'ny Janoary 2015, nanaisotra sary nalefany tao amin'ny Facebook misy ny sarin’ ilay mpihazakazaka mitondra ny tarehimarika “D7689″ ny marika fanatanjahan-tena Puma rehefa nahazo fitarainana avy amin'ny mpiserasera mpanohana ny governemanta. Azo adika toy ny hoe faniratsirana kantoney ny “D7″ ary nahasarika fanehoan-kevitra marobe ny sary, toy ny hoe “tohano ny D7 [kid ** eny] ny 689” na “Tonga dia ao, ry Admin!”
Pikantsarin'ny sary nosivanin'ny Puma manokana. Sary avy amin'ny HKFP.
Nanomboka nanala azy tamin'ny fijerena izay misy ny tarehimarika tao Hong Kong ny mpiserasera, ary koa namorona asa kanto sy fakan-tahaka maneso mifandraika amin'ny “689″.
Ity ambany ity fanoharana ny lalao lahatsary novokarin'i Ronnie Chau, mpamokatra lahatsary mpitsikera ara-politika, mampiseho ny fomba nahazoan'ny “689″ hery avy amin'ny Antoko Kaominista Shinoa (asehon'ny marika kaominista). Manana fahaleovan-tena ambony avy amin'ny tanibe i Hong Kong, amin'ny maha fari-pitantanana manokana ao Shina, saingy mahery vaika na izany aza ny fifehezan'i Shina:
Nanamarika ihany koa ny mpiserasera, fa raha hampifanampiana, 6 + 8 + 9 dia manome 23 - toy ny ao amin'ny Andinin-dalàna Fototra 23, izay milaza ny lalàna ao an-toerana momba ny lalam-piarovam-pirenena ao Shina. Nankahalaina tanteraka ny lalàna satria mety manameloka ny fitenenana sy ny asam-panandrata-teny ataon'ny fikambanana tsy miankina maro izay sokajiana fa fandrahonana ny fiarovam-pirenena Shinoa. Noesorina ny volavolan-dalàna mifandraika amin'izany taorian'ny fihetsiketsehana tamin'ny 2003.
Sary nalaza tao amin'ny aterineto, tao amin'ny HKFP.
Saingy tsy i Leung ihany no filoha Shinoa arahin'ny tarehimarika. Voafidy tamin'ny isam-bato 6,89 tapitrisa tamin'ny taona 2008 ihany koa ny filoha farany tao Taiwan, Ma Ying-jeou, ary niharan'ny anaram-bositra ihany koa. Nandritra ny faran'ny herinandro, voafidy tamin'ny isam-bato 6,89 tapitrisa ihany koa ny filoha vaovaon'i Thailandy, Tsai Ing-wen. Tahaka izao ny fijerena ny maha-samihafa ny 689 sy 6,89:
Tsy fantatra mazava raha ho lasa anaram-bositra izany, na dia tsy niafina tamin'ireo mponin'i Hong Kong aza ny fifandrifian-javatra - nitarika famoronana tarehimarika hafa avy amin’ ny Mr & Ms HK People (Andriamatoa & Ramatoa Mponin'i Hong Kong) izany:
Raha mitsangana miaraka amin'ny Mr. 689 i Tsai Ying-wen (Ms. Anglisy izay anaran'i Tsai midika ara-bakinteny hoe Anglisy amin'ny teny Shinoa), lasa mila tsy ho hita ilay farany.
Amin'ny matematika, dia tarehimarika majika ihany koa ny 689. Araka ny fanazavan'ny findthefactors.com, dia tarehimarika strobogramatika (azo vakiana mivadika) ihany koa izy, midika fa azo vakiana ambony ambany.
Pikan-tsary avy amin'ny findthefactors.com tao amin'ny HKFP.
Fitambaran'ny tarehimarika tsy mety voazara afa-tsy amin'ny tenany 227, 229 sy 233 ihany koa izany, ary fitambaran'ny tarehimarika tsy mety voazara afa-tsy amin'ny tenany anelanelan'ny isa 83 sy 109.
Ho an'ny mponin'i Hong Kong, na izany aza, mifandraika foana amin'ny filoha ratsy laza ao an-tanàna ny 689.